Bollywood / Hollywood – Page4– Fursad Nepal
कपिल शर्मामाथि मडारियो समस्याको बादल
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on कपिल शर्मामाथि मडारियो समस्याको बादल
पछिल्लो केही दिनमा कमेडियन कपिल शर्मा फेरि चर्चामा छन्। केही समयदेखि लगातार कपिले शो को शुटिङको समय रद्द गर्दै बलिउडका स्टारहरुलाई फर्काउन थालेका थिए। यही खराब व्यवहारलाई हटाउन च्यानलको तर्फबाट सुचना आएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ।पछिल्लो केही दिनमा कपिलको स्वास्थ्य केही ठीक छैन। यसकाररण उनी बलिउडका कलाकारलाई शुटिङ नै नगरि फर्काएका थिए। हालै कपिलले फिल्म ‘बादशाहो’का टिलाई फर्काएका छन्।अभिनेता अजय …
बिराट र अनुष्का श्रीलंकामा यसरी समय बिताउँदै
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on बिराट र अनुष्का श्रीलंकामा यसरी समय बिताउँदै
बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र भारतीय क्रिकेटर विराट कोहलीबीचको प्रेम सम्बन्धबारे सबैलाई थाहा छ। उनीहरु लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा छन्। निकै व्यस्त समयका बाबजुद यी दुई एक अर्कालाई समय दिन सधैं तयार हुन्छन्।अनुष्का फिल्म ‘जब ह्यारी मेट सेजल’मा व्यस्त भएकी थिइन् भने विराट एक दिवसीय खेलको लागि श्रीलंकामा छन्। हालै फिल्मबाट छट्कारा पाएपछि अनुष्का विराटलाई भेट्न श्रीलंका पुगेकी थिइन्।उनीहरु आफ्नो …
प्रियंकालाई किन निन्द्रा लाग्दैन?
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on प्रियंकालाई किन निन्द्रा लाग्दैन?
अभिनेत्री प्रियंका चोपडालाई निद्रा नलागेर हैरान भएकी छन्। उनी आफैलाई निन्द्रा नलाग्नुको कारण थाहा छैन। प्रियंकाले आफ्नो ट्वीटरमा यसबारे जानकारी दिँदै निन्द्रा नलागेर हैरान भएको बताएकी छन्।उनले लेखेकी छन्,‘जब मलाई निन्द्रा लाग्दैन, तब मेरो दिमागमा धेरै कुरा खेल्छन्, यसको कारण अत्याधिक थकान हो की विमानको यात्राको कारण हो, म अचम्ममा छु ?’उनी आफैलाई यस्तो समस्याको कारण थाहा नभएको बताउँदै निकै …
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on पुनम पाण्डेको फेरि अर्काे धमाका
हमेशा बोल्ड अन्दाज र क्रियाकलापका कारण हमेशा चर्चामा छाइरहने अभिनेत्री पुनम पाण्डे एक पटक फेरि धमाका बच्चाउने तयारीमा छिन् । उनले सामाजिक संजाल मार्फत आफू धमाका गर्न तयार रहेको बताएकी हुन् ।एक सेक्सी फिगर सहितको तस्बिर पोष्ट गर्दै उनले आफ्नो धमाकेदार नृत्य हेर्न आफुसँगै रहन फ्यानलाई आग्रह गरेकी छन् । उनले आफु छिट्टै एक म्युजिक भिडियोमा धमाकेदार आइटमका साथ देखिन …
प्रियंका एक नं. हिट लिष्टमा, यस्तो छ दश नायिकाको तालिका
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on प्रियंका एक नं. हिट लिष्टमा, यस्तो छ दश नायिकाको तालिका
बलिउड नायिका प्रियंका चोपडा सुन्दर नायिकामा शीर्ष स्थानमा परेकी छन् ।आजतक र इण्डिया टुडेले कर्भी इन्साइटसँग मिलेर गरेको मत सर्वेक्षणमा प्रियंकाले बढी मत पाएकी हुन् । यो सर्भे २०१६ देखि २०१७ बीचको समयमा भएका थियो ।भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार देशका १९ वटा राज्यमा गत १२ जुलाईदेखि २३ जुलाईसम्म यो सर्भे गरिएको थियो । ‘मुड अफ द नेशन’ नामबाट गरिएको यो सर्भेमा …
किताबका लागि गायिका माइलीको नाङ्गो तस्बिर
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on किताबका लागि गायिका माइलीको नाङ्गो तस्बिर
विश्वप्रसिद्ध गायिका माइली साइरसले डेविड लाशपैलको किताब ‘लास्टफाउण्ड’का लागि न्यूड फोटो खिचाएकी छिन् ।फोटोमा माइली एक परीको रूपमा देखिएकी छन् । फोटोमा उनी न्यूड देखिएकी छिन् । तर, बास्तवमा गायिका माइलीले शरीरमा एक पारदर्शी बडीसूट लगाएर यो फोटो खिचाएकी हुन् ।पारदर्शी बडीसूटमा पिंक कलरको क्रिस्टल लगाइएको छ । जसले गर्दा माइली फोटोमा पूरै नाङ्गो देखिएकी छिन् ।‘लास्टफाउण्ड’ लाशपैलको दशक अगाडिको …
बिपाशा बसुले मेकअप नगरेको अनुहार यसरी लुकाइन्ः करिना, जान्ह्वी पनि भेटिए
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on बिपाशा बसुले मेकअप नगरेको अनुहार यसरी लुकाइन्ः करिना, जान्ह्वी पनि भेटिए
पछिल्लो दिन बलिउड सेलिब्रिटी विभिन्न स्थानमा भेटिए । बिपाशा बसु श्रीमान् करण सिंह ग्रोवरसँग रकी हाउस बाहिर भेटिइन् । यतिबेला बिपाशाले मेकअप गरेकी थिइनन् । उनी कारमा बस्ने बित्तिकै मिडियाले फोटोग्राफरले उनको फोटो खिच्न सुरु गरिहाले । उनले क्यामराबाट आफ्नो मेकअप नगरेको अनुहार लुकाउने पूरा कोसिस गरिन् । सुरुमा उनले हातले आफ्नो अनुहार ढाकिन् त्यसपछि मोबाइलले लुकाइन् । श्रीदेवीकी छोरी …
नग्न तस्बिर पोष्ट गरेको भन्दै ऋषि कपूरविरुद्ध उजुरी
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on नग्न तस्बिर पोष्ट गरेको भन्दै ऋषि कपूरविरुद्ध उजुरी
ऋषि कपूर ट्वीटरमा निकै एक्टिभ छन् । उनका लगभग सबैजसो ट्वीट विवादमा घेरिने नै गर्छन् । सामाजिक मुद्दामा खुलेर आफ्नो विचार ट्वीटरमा सेयर गर्ने यी नायक अब पुनः आफ्नो ट्वीटका कारण चर्चामा छन् । ट्वीटरमा एक बालकको नग्न तस्बिर पोष्ट गरेर ऋषि कपूर कानूनी दाउपेचमा फस्न सक्छन् ।ऋषि कपूरले ट्वीटरमा भित्री आवाजको विषयमा एक ट्वीटसहित बालकको नग्न तस्बिर सेयर गरेका …
कपिल शर्माले पुनः रद्द गरे अजय देवगनसँगको सुटिङ
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on कपिल शर्माले पुनः रद्द गरे अजय देवगनसँगको सुटिङ
‘द कपिल शर्मा शो’ को सुटिङ रद्द हुने क्रम जारी छ । लगातार जसो सेलिब्रिटीसँगको सुटिङ रद्द भइरहेको छ । अब यो सूचीमा ‘बादशाहो’ समूहको नाम पनि जोडिएको छ ।वास्तवमा आइतबार ‘बादशाहो’ को स्टार कास्टसँग सुटिङ हुने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर स्पटबोइ इ को खबर अनुसार कपिल शार्मा सेटमा पुगेनन् ।फिल्मको पूरा समूहलाई साढे ११ बजे सुटिङका लागि …